Qoraal-gacmeedka - Sida loo helo lamaanaha ku habboon qorista waraaqaha
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato!
Hada iska dhaadhici!
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno hadal iyo ficil!
Hadda wax weyddii!
Fikradda ah Qoraalka cirfiidka wuxuu isu beddelay erey qof walba yaqaan, gaar ahaan sannadihii ugu dambeeyay.
Laakiin muxuu macnaheedu yahay qoritaanka ghostwriting?
Asal ahaan, waa taas U adeegsiga adeeg macmiil ujeedkiisu yahay shaqo qoraal ah oo loo qoro iyadoo loo eegayo qeexitaankiisa iyo rabitaankiisa. Dabcan tan waxaa ka mid ah shaqada tacliinta oo kale Bachelor-, ama shahaadada Masterka, Laakiin sidoo kale waxaa loo fasiran karaa si aad u ballaaran: Buugaagta, maqaallada, qoraallada iyo qaabab kale oo qoran ayaa sidoo kale matalaya aagagga shaqada qoraaga.
Xitaa codsiyada, bandhigyada iyo warbixinnada waxay noqon karaan qaybo ka mid ah aagagga mawduucyada ay qorayaasha ghostwriter ku xeeran yihiin.
Tani waa si sax ah sababta aan had iyo jeer uga helno waxqabadyada qormooyinka qalaad shisheeye. Si kastaba ha noqotee, dadkani ma matalaan wax aan ka ahayn qoraalo bilaash ah.
Laakiin maxaad si sax ah uga baahan tahay inaad ka ogaato qorista ghost?
Halkan hel ...
... su'aalaha oo dhan jaleeco!
Waa maxay macnaha qorista (aqoonta) runta ah?
Maxayse jirtaa waxaas oo dhan?
Qoraalka ghost guud ahaan:
U qorista qoraalo dhinac saddexaad oo ku xiran iskaashigaaga
... sidaas awgeed wuxuu fududeynayaa waxqabadka ruuxa.
Asal ahaan waad awoodaa Ghostwriter waxaa loo isticmaali karaa ku dhowaad dhammaan aagagga.
Hadday tahay codsiyo, khudbado, baloogyo, buugaag ama bandhigyo, ama qaybta cilmiga iyo sayniska, sida guryaha, bachelor-ka, mastarka, takhasuska iyo cilmiga dilpom.
Baaritaanadan "cirfiidka", qor oo sax shaqada qoraalka oo ku saabsan magaca macmiilka ka dibna u diyaari kooxda saddexaad. Waxay kuxirantahay qeexitaanada iyo helitaanka tusaalooyin iyo dukumiintiyada loo baahan yahay, qoraalka waxaa loo qoray sida runta ah waxyaabaha ugu macquulsan.
Qoraalka ghost tacliinta markiisa ...
... waa inuu buuxiyaa dhowr shuruudood si loogu tixgeliyo tayo ahaan ku filan!
Si loo buuxiyo shuruudaha shahaadada tacliimeed, qoraallada rasmiga ah, bulshada iyo cilmiga waa inay lahaadaan a u baahan cadeyn karo ujeeddo la qoro oo ka sarreeya dhammaan laakiin Kalsoonida cadeyn karo.
Markaa waxaa dhacda in qorayaasha Papernerds had iyo jeer yihiin aqoonyahanno aqoonyahanno ah oo soo bandhigi kara khibrad ku filan maadooyinkooda oo ay ka yaqaaniin farsamaynta saxda ah ee loo adeegsado ilaha tacliinta.
Markaad shaqaaleyso shaqaale takhasus leh, waxaan kuu balan qaadi karnaa tayada ugu fiican iyo caqliga wanaagsan!
Qoritaanka cirfiidka waa sharci darro, maahan?
Maya, qoraalka qormooyinku had iyo jeer wuxuu ahaa sharci walbana wuu ahaan doonaa.
Sababtoo ah asal ahaan shaqaaleynta ghostwriter waxay u dhigantaa adeegsiga adeeg!
Xorriyadda qandaraaska iyada oo aan lagu xadgudbin xuquuqda dhinacyada saddexaad waxay ka khuseysaa aaggan si la mid ah kuwa kale.
Haddii qoraaga la magacaabay iyo in kale haddaba waxay ku xiran tahay heshiisyada qandaraaska.
Tani waxay sidoo kale ku jirtay hal Xukunka Maxkamadda Sare ee Frankfurt (01.09.2009 - Ref.: 11 U 51/08) waa la xaqiijiyay.
Isticmaalka ghostwriters waxaa lagu beeray meelo badan maalmahan sidaa darteedna mar dambe looma quudhsado.
Hadday tahay dhinacyada warbaahinta, siyaasadda, sayniska ama iskeed u shaqaynta: weydiisashada dukumiinti qoran waxay dib kuu siin kartaa waqtigii aadan haysan.
Qorista tusaalooyinka Shaqada guriga, Tixraacyo, Muxaadarooyin macallin ah, Darajada Bachelor iyo qormooyinka kale maaha wax laga cawdo dhinaca sharciga.
Achtung! Qorista qormooyinka ma aha wax laga cawdo xagga aragtida sharciga, way ka duwan tahay soo gudbinta shaxanka oo ah baaritaan gooni ah!
× Tuur digniinta
Maxay yihiin qaabdhismeedka sharciyeed?
Waxay aad ugu tiirsan tahay iyaga Adeegsiga qoraalka on!
Qoraayaasha ghostwriters kaliya uma shaqeeyaan qaab taageera ardayda, laakiin sidoo kale shirkado badan iyo qoraayo kuwaas oo, si fudud loo dhigo, u baahan caawinaad xagga qorista maxaa yeelay ma jiro waqti ku filan ama waxay kugu tiirsan yihiin higgaadinta qoraalka qalad-la'aan rabto inaad baxdo.
Taasina waa waxa saxda ah ee loogu talagalay.
Waxa ay macaamiishu ku sameeyaan sheyga ugu dambeeya kuma jiraan gacanta ghostwriters.
Tusaale ahaan, noocyada caanka ah ee gudbinta qof kale shaqadiisa ayaa laga mamnuuci doonaa inaad adigu leedahay, sida aad ugu koobiyeysay dugsiga, sax?
Si kastaba ha noqotee, adiga xaaraan kama aha naftaada Caawinta maskaxda oo saxid hel ..
Sida aad u aragto, qorista ghost waa in aan loo arkin wax taban haba yaraatee!
Goorma ayaa qoraal-gacmeedka dhabta ahi macno samaynayaa?
Qoraal-gacmeedku maaha dhacdo gooni ah. Inbadan waxay u taagan tahay mid Fududeynta shaqada taasi maahan in la xaqiro.
Kaliya qiyaasi inaad buug qortay oo aad hadda rabto inaad u diyaariso suuqa. Nasiib darrose, saaxiibbadaa midkoodna ma haysto waqtigaas badan ee ay ku dhex maraan buuggaaga oo ka kooban 1500 bog, erey iyo erayba Cilad bixinta inaad aaddo Dhinaca kale, adigu waxaad qortay buuggan adiguna waad arkeysaa wax badan oo ka mid ah Qaladaadka higaada iyo higgaadinta aan ka badnayn Marka waxaad ku jirtaa guuldaro aad u badan tahay inaad kaligaa iska ogaan doonto waqti dheer iyo shaqo badan kadib.
Taasina waa waxa saxda ah ee waraaqaha loogu talagalay!
Xaaladdan oo kale, shaqaalahayaga khabiirka ah ayaa ku farxi doona akhrinta buuggaaga sixid oo waliba la hubiyey Dhacdooyinka xatooyada.
Laakiin sidoo kale aagga of tababarka tacliinta iyo sayniska qoritaanka ghost ayaa kaa caawin kara.
Bal ka fikir halkaan in shahaadadaada oo dhami ay kuxirantahay hal shaqo. Nasiib darrose, hal hal kama aad helin xirfaddaadii oo dhan qoraalka tacliinta qoran, waa inaad u shaqo tagtaa jaamacadda si aad u maal galiso waxbarashadaada sidaa darteedna si fudud kuma qaadan kartid laba bilood oo fasax ah ama, si fudud waqti uguma lihid.
Halkan, sidoo kale, waxaan diyaar u nahay inaan kula talinno kana caawinno THindisaha soo-jeedinta, qaabaynta, xigasho sax ah iyo sixitaanka incl. Jeegaga khayaanada.
Tani sinnaba looma diidi karo, maaddaama badeecada ugu dambaysa ay adiga kaa imanayso in kasta oo wax walba jiraan!
Waxaan kaliya kuu nahay adiga si loo caawiyo!
Ma jiraan koox bartilmaameed gaar ah u ah qorayaasha cirfiidka?
Sida meelaha oo dhan ka jira waxa loogu yeero Kooxaha diirada saarakuwaasoo adeegsada adeegyadeenna badan. Waxaa jiri kara sababo dhowr ah tan: waqti aad u yar ama aqoon farsamo ka dhigin wax aan macquul aheyn in lagu dhufto waqtiga loo qabtay, ama su'aalo la weydiiyo qaabaynta qaab dhismeedka iyo Hababka xigashada dib u dhig
Ugu dambeyntiina, go’aanka waa in marka hore la qaataa: Dabcan, kuwa la siiyay waa in la tixgeliyaa Shuruudaha, Qualit .t iyo natürlich gobanimada.
Faa'iidada macaamiisha ayaa markaa ka socota shirkadaha bixiya a joogitaanka sumcadda ugu habboon higso Wakaaladaha latalintakuwaas oo ka helay caawimaad qaabab xirfadeed brauchen, Madaxdakuwa leh caawinaad sixitaanka cusub Foomamka u baahan tahay ilaa shakhsiyaadka, sida ardayda hela a Bachelor ama shahaadada mastarka waa inay soo gudbiyaan
Asal ahaan, kooxdeena bartilmaameedku waxay u fidsan tahay qof walba meelaha u janjeedha waxqabadka nolosha midkaas dejin gaar ah oo aqoon u leh iyo tusaalayn u baahan Taasina waa waxa aan halkaan u joogno!
Waa maxay kharashyada aan filan karo markaan shaqaalaysiiyo qorayaasha rooga?
Si kooban, waxaa loo dhihi karaa halkan: Dadaalka badan, midka qaaliga ah natiijada ugu dambaysa ayaa noqon doonta.
Tan tan waa a wax soo saar shakhsi ah iyo hal mar ee sheyga, qiimaha dabcan wuxuu ku saleysan yahay dadaalka.
Waxyaabaha soo socdaa waa kuwo go'aaminaya annaga:
Baaxadda + Mawduuca + hami + waqti go'an
Intaa waxaa dheer, qiimaha dabcan sidoo kale waxay kuxirantahay shahaadada tacliimeed ee lagaa rabo inaad gaarto.
Marka waxaa dhacda in a shahaadada bachelor-ka sharraxa oo leh 30 bog ayaa aad uga jaban mid ka mid ah cilmi-baarista sayniska sahaminta oo leh 60-90 bog. Waxay kuxirantahay adeegsiga shaqaalaha, sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho lasocda aaga maadada.
Marka waad arki kartaa in sameynta sicirka sicirka uu macno darro ku noqon karo kiisaskaas.
Waan ku faraxsanahay inaan kuu ogolaano dalab aan qasab ahayn maxaa yeelay qorayaasha ghostwriters ma ahan kuwo qaali ah sida aad had iyo jeer u malaynayso!
Shaqadaydu run ahaan ma tahay mid sir ah?
caqli gal ayaa ku xigta Qualit .t unsere mudnaanta ugu sareysa!
Taasi waa sababta shaqo kasta, haba u yaraatee, mid ay yeelato shaqaale aqoon leh la heli karo.
Laga soo bilaabo qoraalka ilaa wareejinta, waxaad la xiriiri kartaa qoraagaaga cirfiidka waqti kasta waxaadna yeelan kartaa damiir nadiif ah Hubi xaaladda codsi
Sidaas agagaarka a ikhtiyaarka ugufiican si loo hubiyo inaad had iyo jeer haysato xiriir toos ah sida kormeerahaaga iyo qoraa.
Macluumaad dheeraad ah!
Ma jiraa damaanad qaad qanacsan?
Um tayada ugu fiican Si loo damaanad qaado, haddaanu nahay Papernerds.de waxaan qaadnay tallaabooyin aan ku hirgelinayno fikradahaaga sida ugu macquulsan:
1. Kaliya ka shaqee waraaqaha Shaqaalaha aqoonta leh, yacni si faahfaahsan tacliinta, ardayda dhakhaatiirta, macallimiinta, saynisyahannada iyo baarayaal.
2. Shaqaalaheennu dhammaantood tan bay ku hayaan qorista iyo xirfadaha gorfayntasi aad sifiican ugu hirgalin karto waxaad rabto. Tusaale ahaan, waa inaad nagu qancisaa qoraal muunad ah markaad kubiirto shirkadeena!
3. Waxaan dhisnaa xiriir joogto ah macaamiishayada! Si kale haddii loo dhigo, shaqada waxaa loo soo saari doonaa si sax ah iyadoo loo eegayo qeexitaankaaga waana dib loo eegi doonaa lagana hadli doonaa marar badan! Laga soo bilaabo dulmar ama Ka soo qaad, oo ku saabsan qaabdhismeedka cutubyada, mowduucyada / aragtiyaha, qaababka xagga tixraaca iyo qaabka qorista, wax walba si faahfaahsan ayaa looga hadlay!
4. Haddii aysan wax ku habboonayn: mid baa nala leh Partnerin aad sidoo kale sheegi karto haddii aadan ku qanacsanayn.
Waxaan kaliya oo aan horumarin ku sameyn karnaa haddii aad noo sheegto waxa ku dhibaya. Taasina waa waxa aan dooneyno!
Haddii aadan weli si buuxda ugu qanacsanayn qoraalkaaga dhammaadka, waxaan sidoo kale ku siin karnaa macluumaad dheeraad ah halkan Dib u eegis hadlo.
Si fudud ula xiriir kormeerahaaga!
Jeegga xatooyada miyaa qasab ku ah qoraaga beenta ah?
Papernerds.de waxaad dabcan ka heli doontaa mid shaqadaada ah jeeg lacag la’aan ah ku.
Waxaan dooneynaa inaan kaafiino shaqada iyo adigaba tayada ugu fiican keen, taas oo ah sababta ay sidoo kale muhiim kuugu tahay inaad ogaato in shaqadaadu waafaqsan tahay xeerarka guud ee lagu dabaqi karo!
Marka si looga fogaado xatooyada, waxaan leenahay heer farsamo sare shaqaale karti lehkuwaas oo si sax ah u garanaya waxa la oggol yahay iyo wixii aan la oggolayn.
Si laguu siiyo difaac dheeraad ah, waxaan ku siin doonaa imtixaan iyadoo la kaashanayo kuwa ugu fiican Barnaamijka xatooyada ku.
Haddii aad weli walwal qabto, waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta!
Dabcan, waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka isticmaalka barnaamijyo bilaash ah ka bilow jeegaga internetka.
Yaan kala xiriiri karaa qoraalka qoraalka ghost?
den sax ah qofka lala xiriirayo Helitaankeeda inta badan ma sahlana.
Internetku wuxuu kordhiyay noocyada kala duwan ee adeegsiga qoraalka.
Laakiin sidee baan u go'aansadaa maxaase ii habboon xalka aniga?
Halkan waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan waxa la heli karo:
Waad raadineysaa qof dhab ahaan hal mowduuc oo gaar ah?
Markaa waxaad ku guuleysan kartaa ikhtiyaarkan.
Shaqaalaha cirfiidka madaxa banaan Macaamiishaadu waxay raadiyaan naftooda oo markaa kaliya waxay u adeegaan hal mowduuc, oo ah midka ay ku yaqaanaan. Dhamaaday!
Madal / bulshooyin loogu talagalay adeegyada qoritaanka
Ku dhowaad sida loo yaqaan 'eBay classified': oo loogu yeero Meelaha lagu qoro Macaamiisha ayaa dhigi kara adeegyada la doonayo waxayna heli karaan dalabyo. Dabcan, qiimayaashu si aad ah ayey halkan ugu kala duwan yihiin, maadaama aad dalabyo kala duwan ka heleyso dhinacyo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay sidoo kale adkeyneysaa isbarbardhiga tayada, maxaa yeelay cilmi baaristu adigaa iska leh. Ma aha dalab kasta oo markaa keenaya waxa uu ballanqaaday.
Wakaaladaha qoraaga - adeegyada qorista
ka xal dhameystiran loogu talagalay macaamilka ugu dambeeya: waxaad leedahay bog ku dhow dhammaan maadooyinka iyo xulasho xirfadlayaal horey loo xushay qorayaasha ghostwriters leh khibrad sannado ah. Waxaad leedahay qof si toos ah loola xiriiri kara dhammaan kiisaska oo aad isku halleyn karto Qoraallada ka madhan khayaanada horay u sugaya. Intaa waxaa sii dheer, inaad heshiis rasmi ah la galeyso shirkad diiwaangashan oo aad sidoo kale ku hesho amniga sharciga.
Waxaa jira adhi madow halkaan sidoo kale, laakiin waxaad ku rujin kartaa iyaga oo leh talooyin iyo tabaha yar.
Moodelkee aakhirka aad doorato dabcan adiga ayaa iska leh.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad xiiseyneyso in shaqadaadu ay qabato hay'ad adeeg sida Papernerds.de, markaa Nala soo xiriir ku faraxsan macluumaad dheeraad ah!
Sideen ku heli karaa qoraaga cirfiidka saxda ah?
Nasiib darrose taasi waa Warshadaha ghostwriting oo aan lagu buuxin fikradaha xun ee aan waxba ka jirin.
Sida meelo kale oo badan, Internetku wuxuu kaloo kuwa wax khiyaameeya fursad u siiyaa inay macaamiisha ula dhaqmaan si dhakhso leh oo fudud.
Taasi waa si sax ah sababta ay muhiim ugu tahay Wax ka qabashada hay'adaha qorista si loo hubiyo tixraacyada ay bixin karaan iyo sida dhabta ah ee loo fidinayo dalabkooda.
Adiga, oo kooban, xaqiiqooyinka ugu caansan:
Sidee ayay shirkaddu u egtahay?
Muddo intee le'eg ayay hay'addii aad dooratay ku jirtay suuqa oo ma jiraan wax caddeyn ah oo aasaas leh (dib u eegis, maqaallo leh timestamps, ...)
Caadi ahaan, dadka wax khiyaameeya ma sii joogaan internetka muddo dheer.
Hay'adaadu ma xarunteedu tahay Jarmalka, Switzerland ama Austria?
Hubso inaad isticmaasho cinwaanada dhabta ah iyo lambarrada taleefannada markaad dooraneyso.
Haddii aadan qof ula soo xiriirin qof ahaan inta ay socoto baaritaanka hay'addu, aad ayey macquul u tahay inaad la kulantay shirkad shisheeye oo been abuur ah.
Qiimayaasha si aad ah uga hooseeya celceliska qiimaha guud waa inay noqdaan calaamad muujinaysa inaadan ku ciyaareyn kaararka daacadda ah halkan.
Noocyada noocan oo kale ah ama waxaa qora qorayaal aqoonyahanno khibrad yar leh, ama gabi ahaanba wax adeeg ah kama helaysid.
Qiimaha sida tayada ugu habboon ayaa dhab ahaan loogu isticmaali karaa qiimeyn go'aan.
Hesho dalabyo dhowr ah si kastaba ha noqotee ka dibna qaado waxa adiga kugu habboon iyo waxa ugu muuqda ee ugu ammaansan, maxaa yeelay wax badan ayaad ballan qaadi kartaa, laakiin dhab ahaan ma bixin kartid.
Waa maxay fikradda guud?
Sidee daahfuran u yahay qiimaha?
Miyaad aragti guud ka haysaa adeegyada la bixiyo, oo ay ku jiraan shaabadda waqtiga?
Miyaad heshay qiyaaso macquul ah bilowgii?
Sidee ayey u shaqeysiintu u shaqeyneysaa oo aad fursad u leedahay inaad codsato sixitaan ama inaad hubiso horumarka?
Mise waxaad heshay sicir fidsan oo aan burburin?
Waa maxay adeegyada ay wakaaladu bixiso?
Ka hubi faylalka faylalka ee wakaaladaha shakhsiyaadka meelaha takhasuska leh iyo noocyada shaqada ama qorista. Haddii aadan ka helin wax tilmaam ah shaqaale karti leh oo ka socda aagagga, markaa waa inaadan wax dalab ah halkan ku soo dhigin.
Sidee adeegyada loo xayaysiiyaa?
Sidee wakaaladu uga shaqeysaa shabakadaha bulshada, xayeysiiska ama warsaxaafadeedyada ama bogagga la xiriira?
Dib maku celin kartaa jadwalka waqtiga?
Haddii kale, isla sidaas ayaa lagu adeegsanayaa halkan: Haddii aad kaliya u heli karto hal gelitaan oo hay'addan ah, markaa waxaad sidoo kale ka heshay adeeg bixiye shaki leh halkan.
Maxay qoraallada ghostwriter uga fiican yihiin kuwaaga?
Su’aashan dhab ahaan si dhakhso leh ayaa looga jawaabaa.
Haddii aadan u baahnayn caawimaad oo aad hubto sababtaada, haysato waqti kugu filan, ama xitaa aad ugu raaxeysato qorista waraaqaha tacliimeed, ma raadin doontid qoraal-yaqaan.
Si kastaba ha noqotee, a Sixitaanka labaad ee ciladaha hagaajinta iyo hagaajinta horseedi.
Mabda 'ahaan, qorayaasha cirfiidka ayaa si sax ah u caawin kara dadka aan ku dhalan shaqada noocan ah ama si fudud uga quustay. Intaa waxaa dheer mid ayaa jira Waqtiga iyo tayada nolosha mar labaad, maxaa yeelay walbahaarka maalinlaha ah iyo cabsida guul darradu waxay sidoo kale baabi'in karaan dhinacyada taban.
Ma u baahan tahay tababar gaar ah oo xirfadda ah adoo qoraaga ah?
Qoraalka ghost ayaa wali firfircoon shaqo barasho la'aanTaas oo nasiib daro sidoo kale ka dhigan tahay in si sharci ah ku hadla qof walba uu isugu yeeri karo ghostwriter.
Taasi waa si sax ah sababta ay macquul u tahay Kiisaska khayaanada aad ugu sarreeya aaggan.
Laakiin maxaad samaynaysaa haddii aad runtii u baahan tahay caawimaad oo aad jeclaan lahayd inaad ka faa'iideysato?
Samee waajibaadkaaga inaad ogeysiiso!
Qiima jaban had iyo jeer ma fiicna, waana sababta sababta aasaaska ugu muhiimsan ee raadintu aysan ahayn qiimaha, laakiin kan Khibrad Qorahaaga.
Miyaad aadeysaa aqoonsiga oo ha u oggolaan in qiimaha uu go aansado isla markiiba.
Ugu dambeyntiina, shuruudahaaga shaqo waa kuwo go'aan qaadanaya, oo markaa sidoo kale ka tarjumaya waxqabadka.
Sideen uga caawin karaa abuurista shaqadayda?
Asal ahaan, macluumaadka badan ee aad noo soo diri karto, ayaa shakhsiyaad badan u abuuri kara shaqadaada.
Fikradaheena gaarka ah, soo jeedimaha, cilmi baarista, iyo tilmaamaha ayaa shaqadeena ka dhigaya mid fudud oo aan awoodno waqtiyada soo celinta degdega ah horseedi.
Inta badan ee aad wax ku darsato shaqsi ahaan, ayaa quruxda badan ee shaqadaadu noqon kartaa.
Dabcan had iyo jeer waa faa'iido haddii aad nala soo xiriirto la xiriir waqtiga. In kasta oo ay suurtagal tahay in warqad lagu qoro waqti yar haddii loo baahdo, way dhib badan tahay Qualit .t hoosta. Qoraalku waa mid ka mid ah hababka hal-abuurka ee bislaada isla markaana horumarin kara waqti ka dib iyo la xiriirka macmiilka. Haddii ikhtiyaarkan aan la heli karin, tani dabcan sidoo kale waxay ka muuqataa socodka qoraalka.
Sidaa darteed: Waqtiga iyo macluumaadka badan ee aad na siin karto, ayaa sii fiicnaanaya!
Iskusoo wada duuboo: waa maxay faa iidooyinkayga iyo khasaarahaygu?
Sababta aad uga raadsato caawimaad ghostwriter aakhirka muhiim ma aha, maxaa yeelay waxaan ula dhaqmeynaa macaamiil walba si isku mid ah noqda. Kuma eedeynayno adiga ama kuwa lamid ah inaad heysato geesinimo aan ku raadsano caawimaad. Taas ka sokow, waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa hay'adaha qorista, sida shahaadada sare ee Tayo iyo xirfad dabcan sidoo kale waxaa laga heli karaa matalaadda shaqadaada.
Kuwa si fiican wax u qabta ayaa lagu abaalmarin doonaa taas!
Khibradda ballaaran ee shaqaalaheennu u keeni karaan miiska ayaa markaa kaa caawin kara inaad hagaajiso kanaga si looga faa’iideysto kartida buuxda.
Xitaa haddii cillad yar kaa haysato adeegsiga luqadda tacliinta. Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi way kula shaqeyn karaan si aad ugu hirgeliso fikradaha qaab bartilmaameed iyo qaab dhismeed aan cillad lahayn oo ula jaanqaadi kara wada shaqeynta dhammaan baahiyahaaga.
Khasaaraduhu waxay ku jiri karaan la shaqeynta wakaaladaha shakhsiyaadka ama shakhsiyaadka soo ifbaxa marka rajooyinka laga soo bixi waayo waqtigii loogu talagalay ama aan ku filnayn. Xaaladdan oo kale, talo fiican ayaa runtii qaali noqon kara.
Aynu gacan ka geysano sidii looga hortagi lahaa inay dhacaan:
Waxaan kaa caawin doonaa inaad doorato lammaanaha qoraalka saxda ah oo dhig taada Rabitaan ficil.
Anaga waad naga helaysaa toos ula xiriir adeeg bixiyahaaga sidaa darteedna waad awoodaa saameyn firfircoon qaado hawsha qorista shaqadaada. By heer sare Maareynta waqtiga miyaan karnaa Beddel codsiyada sida ugu habboon, waa haddii aad noo timaaddo waqtiga loogu talagalay! Si wada jir ah ayaan markaa kaaga wada shaqeyn karnaa cilmi baarista iyo qorista waxaanna abuuri karnaa qoraal shaqsiyeed oo ku habboon baahiyahaaga.
Ugu dambeyntiina, shaqada wanaagsani waxay leedahay qiimaheeda waxayna ku hadleysaa qadarintaada shaqada qoraalladeenna cirfiidka!
Haddii aan xiiseynay xiisahaaga, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto:
Waxaan sugeynaa baaritaankaaga!
La xiriir hadda!